Uzo abuo iji wepu ngwa gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe anyị nwere ngwaọrụ mkpanaka anyị (ma ọ bụ ekwentị ma ọ bụ Mbadamba ụrọ) anyị nwere ike ịbụ na anyị etinyela ọtụtụ ngwaọrụ na emesịa, anyị enweghị uche. N'oge ahụ kpọmkwem bụ mgbe anyị raara onwe anyị nye n'ịchọpụta nke nwere ụzọ kachasị mma iji wepu Ngwa na gam akporo.
Mana enwere ike jụọ mmadụ Kedu ihe kpatara m ga-eji wepu Ngwa na gam akporo ma ọ bụrụ na ha anaghị arọ? Azịza ya dị nnọọ mfe, ebe ọ bụrụ na anyị abawanye na ngwaọrụ ndị ọzọ na ngwaọrụ mkpanaka anyị, oghere ebe ha bi ga-ejupụta n'ikpeazụ, anyị agaghị enwe ihe ịchekwa ma wụnye. Yabụ, ọ bụrụ na anyị ewere ụfọdụ n'ime ngwa gam akporo ndị a anyị anaghị eji mkpa dị mkpa, gịnịzi ga-aga n'ihu na-edebe ha na kọmputa anyị?
1 Akpa ozo iji wepu Ngwa na gam akporo
2 Nke abụọ ọzọ iwepụ Ngwa na android
Akpa ozo iji wepu Ngwa na gam akporo
Ndị na-agụ ya na ndị ọrụ nke ụdị ngwaọrụ mkpanaka a ga-achọta enyemaka ọzọ na ịntanetị mgbe iwepu ya Gam akporo ngwa, ọ bụ ezie na ha na-enwekarị usoro ndị na-anaghị adị mfe ma na-esiri n'otu oge, buru oke ibu iji gbuo ha. Ihe atụ nke akụkụ ikpeazụ a dị na nkwanye nke usoro ngwá ma ọ bụ laghachi «Factory Ọnọdụ» nke otu, nke ga-ehichapụ ihe niile mana ọ ga-amanye anyị ka anyị wụnye ọzọ, ngwa ndị ahụ niile anyị ji rụọ ọrụ ogologo oge.
Enweghị nwere ịmụta a ma ọ bụ ndị ọzọ ike usoro, ike iwepụ Gam akporo ngwa Ọ bụ ihe dị mfe ịme, mana na ụfọdụ echiche anyị ga-ekwupụta site na usoro ndị a na ndụmọdụ n'otu oge:
Akpa anyị na-amalite sistemụ arụmọrụ gam akporo anyị.
Mgbe ahụ, anyị pịa akara ngosi Nhazi dị na desktọọpụ nke sistemụ arụmọrụ anyị gam akporo.
Anyị ga-awụlikwa elu na windo nhazi sistemụ ahụ.
Anyị na-chọta sidebar n'akụkụ aka nri ebe egosiri ụfọdụ edemede na ọrụ.
N’etiti ha ka anyị ga-ahọrọ nke na-ekwu Aplicaciones.
N'akụkụ aka nri nke ụlọ mmanya a, ngwa niile anyị rụnyere ga-apụta, anyị ga-anwa ịchọta nke anyị nwere mmasị na ya ugbu a. Mana tupu iwepu ihe ndia Gam akporo ngwa Na gburugburu ebe anyị hụrụ onwe anyị, anyị ga-ebu ụzọ wepu ụfọdụ data ha na-edekọkarị na nke ka dị ka obere kuki na oghere echekwara nke ngwaọrụ anyị. Karịsịa, anyị ga-anwale:
Wepu ntọala ndabara.
Kọwaa ebe nchekwa ahụ.
Mgbe emechara ọrụ 3 ndị a, anyị nwere ike ịpị akara ngosi "iwepụ" nke dị na akụkụ nke elu, ya mere, a ga-ahapụ ngwa ahụ na sistemụ gam akporo anyị na enweghị akara ọ bụla.
Nke abụọ ọzọ iwepụ Ngwa na android
Ugbu a, ọ bụrụ na ọ bụ maka ihe ụfọdụ ịnweghị ike ịchọta ngwa ị rụnyere na sistemụ arụmọrụ gam akporo gị, mgbe ahụ ị kwesịrị ịnabata usoro ọzọ iji mezuo ebumnuche a; Na nke ọzọ a anyị ga-ekwupụta, onye ọrụ ga-eji ya Google Play, ime ihe ndị a:
Choo akara ngosi Google Play na desktọọpụ gam akporo.
Pịa na akara ngosi a.
Window ga-emeghe na interface ụlọ ahịa Google.
Anyị pịa na nhọrọ «Aplicaciones»Odoro na elu aka ekpe.
Site na nhọrọ egosiri anyị họrọ «Ngwa m".
N'oge a anyị ga-enwe ike ịghọta ekele ahaziri iche na ngwa anyị arụnyere na sistemụ arụmọrụ Android ndị a; n'aka ekpe ga-enwe ụlọ mmanya, nke ngwa ndị ahụ niile anyị rụnyere na ndị na-eche ịnata mmelite n'aka anyị ga-anọ. Naanị anyị ga-ele anya n'akụkụ a maka ngwa anyị chọrọ iwepụ iji họrọ ya.
Nke ahụ bụ naanị ihe anyị kwesịrị ime iwepụ Gam akporo ngwa iji usoro ụlọ ahịa Google Play.
Mee oru a nke iwepụ Gam akporo ngwa nwere ebumnobi bụ isi, nke ahụ bụ na ngwaọrụ niile ahụ anyị webatara na sistemụ arụmọrụ anyị n'ozuzu ha bi n'ime ihe ọtụtụ n'ime anyị maara dị ka RAM, nke ahụ ga-ejupụta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na anyị amaghị etu esi ejikwa ngwa ndị a. Onye ọrụ nwere ahụmahụ ga-abanye nhazi usoro iji nye iwu ka ụfọdụ n'ime ngwa ndị a kwaga ebe nchekwa micro SD ma ọ bụ oghere dị n'ime ngwaọrụ ahụ.
Ozi ndị ọzọ - Opera WebKit maka gam akporo ugbu a na Google Play
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Na-achọ ụzọ kachasị mma iji kpochapụ ngwa na gam akporo